अडिशन दङाली टिनेजरहरुका लागी सुवर्ण अवसर हो | Indrenionline.com
Home कुराकानी अडिशन दङाली टिनेजरहरुका लागी सुवर्ण अवसर हो
अडिशन दङाली टिनेजरहरुका लागी सुवर्ण अवसर हो
२०७३ श्रावण ८ गते शनिबार ०८:४८ बजे
विगत केही वर्ष यता राजधानिमा मोडलिङ सम्बन्धि ईभेन्टहरु आयोजना गर्दै आएको ‘ द फेशन प्लसले’ यसपटक पनि देशव्यापी रुपमा अडिशनको आयोजना गरि मिस टिन प्रतिस्पर्धाको यहि आउँदो साउन १५ गते दाङको घोराहीमा अडिसन हुँदैछ । देशका ७ स्थान मध्ये यसपाली पहिलोपटक दाङमा पनि मिस टिनका लागी अडिशन हुने आयोजकले जनाएको छ । यसैसन्दर्भमा ‘ द फेशन प्लस’ की जिल्ला कोर्डिनेटर श्रृजना न्यौपाने संग हामीले कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ श्रृजना संगको कुराकानीको सम्पादित अंस ।
अडिशनको तयारी के कसरी भइरहेको छ ?
दाङको टिनेजरहरुका लागी आफनो क्षमता प्रदर्शन गर्न यो महत्वपूर्ण अवसर हो । हामीले केन्द्रसंग धेरै छलफल गरेपछि यो ‘ईभेन्ट’ लाई दाङमा पनि आयोजना गर्न लागेका छौं । हाल अडिशनका लागी मुख्य गरी प्रचारप्रसारमा जोड दिएका छौं । यस्तै स्थानिय तहमा अन्य सरोकारवाला निकायसंग पनि कार्यक्रमको सफलताका लागी छलफल गरिरहेका छौं ।
अडिशनप्रति टिनेजरहरुको के कस्तो आकर्षण पाउनुभएको छ ?
पहिलोपटक यस्तो ‘ईभेन्टको’ आयोजना गर्न लागेकोले मान्छेहरुमा अलिक कन्फयुजन छ । अर्कोकुरा संस्कारका रुपमा पनि यस्तो इभेन्टसंग हाम्रो समुदाय भिज्न सकेको छैन । त्यसैले टिनेजरहरुको आकर्षण हुँदाहुदै पनि केही अडचनहरु पक्कै पनि छन । यद्यपी हामी विश्वस्त छौं अडिशनमा टिनेजरहरुको व्यापक सहभागीता रहनेछ ।
फस्र्ट राउण्डमा सहभागीताका लागी के कस्ता मापदण्ड आवश्यक छन ?
फस्र्ट राउण्डमा सहभागी हुन चाहनेहरु सर्वप्रथम त नेपाली नागरिक हुन आवश्यक छ । यो संगै १४ देखि १९ वर्ष उमेरसमुह , विवाह नभएको , एसएलसी पास नभएतापनि सहभागी भएको , र ५ फिट उचाई भएको हुनुपर्नेछ ।
सहभागीता निशुल्क हो वा सशुल्क ?
सहभागीतकालागी शुरुमा एउटा फर्म भर्न आवश्यक छ । फर्म घोराही स्थित परिवार नियोजनको अपोजिटमा रहेको क्रियटिभ लर्निङ सेन्टरमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । फर्मको शुल्क ५ सय रmपैया मात्र राखेका छौ । फस्र्ट राउण्डमा सेलेक्ट भएकाहरुका लागी १ महिन तालिमका क्रममा विभीन्न प्याकेज राखिएकाले सहभागीले पनि अलिक कोपरेशन गर्न आवश्यक छ । जसका लागी १२ हजार ५ सय रुपैया शुल्क राखेका छौं ।
कार्यक्रमले सहभागी एवं विजेतालाई के—कस्ता अवसर प्र्रदान गर्नेछ ?
हामीले यो क्रार्यक्रम मार्फत खासगरी लुकेका प्रतिभाहरुको क्षमता निखारेर उनिहरुलाई समाजमा स्थापीत गराउने उद्येश्य लिएका छौं । त्यसैले सर्वप्रथम त समाजमा आफनो पहिचान बनाउन चाहने युवायुवतीका लागी यो एकदमै महत्वपूण ‘प्लेटफर्म’ हो । यो संगै ‘ईभेन्ट’ प्रथम विजेताले ३ लाख , दोस्रोले २ लाख र तेस्रो हुनेले १ लाख ५० हजार नगद पूरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ । यो संगै म्युजीक भिडीयो , मोडलिङ , कम्र्सीयल विज्ञापन , म्यागजीन तथा पोस्टर, पर्सनल फोटोशुट लगायत अवसर विजेताले प्राप्त गर्नुहुनेछ । यस्तै फस्र्ट राउण्डमा सेलेक्ट हुनुहुने सहभागीहरुलाई राजधानीमा १ महिने ट्रेनिङ प्याकेज छ । जसमा उहाँहरुले पर्सनल फोटोग्राफी , मोडलिङ ,आरजे÷भिजे ट्रेनिङ , कम्युनिकेशन स्किल डेभलपमेन्ट ,स्कलरशिप ,आइईएलटिएस लगायतका कुराहरु सिक्ने अवसर पाउनुहुनेछ ।
अन्तयमा , यो भनदिनस कि विजेता छनोटका आधारहरु के कसो हुनेछन ?
सर्वप्रथमत सहभागीताका लागी माथी मैले भने बमोजीमका क्राइटएरिआ पूरा गर्न आवश्यक छ । यो सगै हामीले एक महिने तालिमका क्रममा उहाँहरुलाई धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्रदान गर्नेछौं । सो क्रममा सहभागीहरुमा अनुशासन देखिनुृ अतयन्त आवश्यक छ । विजेता छनोटका लागी भने प्रतिस्पर्धीमा आत्मविश्वास , टेलेन्ट , अनुशासन लगायतका कुरा हेरिनेछ ।
Previous articleराप्तीका बजारहरुमा ओविआई मोवाइल
Next articleबिजौरीमा पालिएका १३ अष्ट्रिच मरे